တပ်ထွက် အဆိုတော် နေရဲမာန်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » တပ်ထွက် အဆိုတော် နေရဲမာန်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေး
တပ်ထွက် အဆိုတော် နေရဲမာန်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေး
Posted by cherrywine on Nov 9, 2010 in Celebrity, Entertainment | 24 comments
﻿တပ်ထွက် အဆိုတော် နေရဲမာန်ဟာ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် အဆိုတော်မလေး ဂျင်းနီနဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။
ဝယ်သူနည်းပါးတဲ့ သီချင်းခွေတွေကို ဆက်တိုင်ထုတ်နို်ငလောက်အောင် ဘယ်ကဝင်ငွေတွေ
ရနေပါလိမ့်နော် …. သိချင်စမ်းပါဘိ။
တပ်ကထွက်မှပဲ စန်းပွင့်လိုက်တာနော် .. ။မင်းသမီးတွေနဲ့ဖက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာများ ဟောတစ်ယောက် … ဟောတစ်ယောက် … ။
မင်းသား၊ မင်းသမီး၊ အဆိုတော် တွေဟာ ဒီလိုလုပ်မှ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တယ်ထင်တာလေ…………… လုပ်ကြပါစေ…………. ကောင်းမယ် ထင်တာကို လုပ်ပေါ့………….. ဂျင်းနီရေ အမျှ အမျှ အမျှ ပါနော်………
ဂျင်းနီက နေရဲမာန် ဆိုတာသေချာလို့လားဟင် ကြားတာကတော့ နောနော် နဲ့ဆိုလားပဲ အခုပြောင်းသွားရင်တော့ မသိဘူးနော် …
ဂျင်းနီရေ — ကိုယ်ရုပ်နဲ့တန်လို့ လား — ကြိုက်ရမဲ့သူမရှိလို့နဲ့တူပါတယ် —– ဒို့လည်း — အမျှ – အမျှ – အမျှ နော် ။
ဒီသတင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတည်းက freedom news group ရဲ့ ဝက်ဆိုက်မှာ ဖတ်ပြီးပါပြီ ။ အခုမှ ဒီမှာတင်တော့ မဖတ်ရသေးတဲ့လူတွေပေါ်ပင်လေးဖြစ်မယ်ထင်တယ် ။သမီးရေး သူများသတင်းကိုရေးရင် souce လေးပါ ထည့်ရေးပေးလိုက်ပါ ။
သူက GE တပ်ကဆို..တော်တော် ဝါးရတာပေါ့
sorry for that’s uncle drkyawkyawoo . I haven’t any mind for this.Just
only want to share with my fri . thanks for ur care,beware myself
အင်းဟုတ်တယ် နောနော်နဲ့လို့ကြားတယ် Ever Seiko ကပို့ပေးတဲ့ခရီးစဉ်မှာ ချစ်သူနောနော်ကိုပါ ခေါ်လို့ရမလားလို့မေးနေပါတယ်တဲ့
ပြောလို့သာ ပြောတာပါ.. ဂျင်းနီလေးကို သဘောကျတယ်.. မြန်မာ အကလည်း တော်တယ် အသံကတော့ သိပ်သဘောကျတာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့.. အဆိုကော အက ကော လိုင်းပေါင်းစုံ တော်သူလို့ ပြောလို့ရမယ်။ အားလုံးကတော့ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်ရွေးချယ်ကြတာဘဲ..
ဒီခွေးသားက ၊ ကိုယ့်သီချင်း ကိုယ်ထုတ် ဘာလုပ်လုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့၊ ရုပ်နဲ ့အသံက နှစ်ရာမတန်ဘဲနဲ ့။
ဒီသတင်း ဟုတ်မဟုတ်တော့ သေချာမသိပေမဲ့ ဒီနေရဲမာန် ဟာ နေပြည်တော်
ဂျီးအီးတပ်ထွက် ဗိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နေပြည်တော် ဆောက်တုန်းက ငွေတော်တော် အမြတ်ထွက်သွားကာ အခုမှ အဆိုတော် လုပ်ကာ ငွေကြေးခဝါ ချနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ အခွေ ဘုတ်ထောင်ခတင် သိန်း ၂၀၀ဝကျော် ရှိပါတယ။် ဘယ်သူမှလည်း သူအခွေကို ဝယ်နားမထောင်ကြသလို စိတ်လည်း မဝင်စားကျပါဘူး။ စာနယ်ဇင်း ကပ်ဖါး တစ်ချို့ ကိုလည်း ငွေပေးပြီးအင်တာဗျုးခိုင်းပြီး နာမည်မကြီးကြီးအောင်လုပ်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ နောက်ဆုံးကြားသိရတာကတော့ သူက ဗိုလ်ခြောက်တစ်ယောက်ဆိုပါပဲ.။ ရင်းနီးတဲ့အသိုင်းအဝိုင်း က သူကို အစ်မကြီး လို့ခေါ်ဆိုကျကြောင်း……
ဂျင်းနီ ဂျင်ပြာ ကိုရုပ်ကိုမှအာမနာ ဘယ်လိုကောင်ကိုသွာကြိုက်တာလဲ အော် ငါလဲ နင်ကို အမျှပါကွာ အမျှအမျှ……..
ပီလို မန်းလိုက်တာ တော်တော်လန်းတယ်
ဗိုလ်ခြောက်တစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ်မသိပေမဲ့ သူ့မှာမိန်းမနဲ့ သားသမီးတောင်ရှိတယ်။ သူ့မိန်းမက ဆရာဝန်တစ်ယောက်တဲ့ သူ့သမီးတောင် ဟိုတလောလေးကမှ Mandalayမှာ မင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်…
အော် တော်တော်လေး ပြည်သူ ့ပိုက်ဆံတွေရှိသမျှ အိတ်ကပ်ထိုးထိုးထည့်သိပ်ထားတဲ့ ဒီလိုလူစားမျိ ုးတွေမြန်မာပြည်မှာ တော်တော်များနေပီဘဲ။ပြည်သူ တွေရဲ ့အသက်စည်းစိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါမယ် ဆိုတဲ့စစ်သားမျိ ုးယုတ်တွေရေ ခိုးကောင်းတုန်းခိုးထားကြပေါ့။တနေ ့ကြိုးစင်မှာစောင့်နေပါ
ဟာ ဟ.. ဒီကောင်တော့ ဘယ်လောက်တောင် ခိုးပီး တပ်ကနေထွက်လာလဲမသိဘူး… ကြားတာတော့ နေပြည်တော် နဲ့ပက်သက်တဲ့ လမ်းအဆောက်အဦးတွေ ဒီကောင်ကိုင်ပီးထွက်လာတာ ကြားတယ်…. ဒီလောက် စုတ်ပြတ်သပ်နေတဲ့ အသံနဲ့ ပေါတောတောစာသားနဲ့ သီချင်းကို အားပေးမယ့်သူမရှိပဲနဲ့ တခွေပီး တခွေထုတ်နိုင်တယ်နော်… ဒီကောင့်ကို ကြည့်ပီး စစ်ခွေးတွေ ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်…မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပိုက်ဆံသုံးနိုင်တဲ့ သူ အတော်များများကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် စစ်အစိုးရနဲ့ မကင်းတဲ့ သူတွေပဲရှိပါတယ်… အကောင်လို့တော့ ခေါ်ကြတယ်…အမျိုးယုတ်စစ်ခွေးတွေထဲက တကောင်ပေါ့
ဟုတ်ပနော်။တိုင်းပြည်ရဲ ့ငွေ တွေခိုးပြီး အပြင်မှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့ကောင်စုတ်တွေပါလားးး
မန်းလေးကနေ မူဆယ်ကိုပြန်တာ..ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့တိုင်းနီးပါး..သူ့ ခွေကြော်ငြာတွေချည်းပဲ..
ပြီးရင် အဆိုတော် သို့မဟုတ်.. ရုပ်ရှင်မင်းသမိးလည်းမထပ်စေရဘူး..
တမြို့ချင်းစီ မပြောနဲ့ .. မန်ေးလးမှာတောင်မှပဲ မထပ်ဘူး.. သူ့ရုပ်နဲ့သူ ချောချောလေးတွေနဲ့တွဲဖို့ .. ဒီဘဝမှာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိလို့ပဲ.. (ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တာနဲ့ပဲ) ဟောတစ်ယောက် ဟောတစ်ယောက်နဲ့တွဲပြနေတာ.. ကလေးသရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်းကအစ .. လူကြီးသရုပ်ဆောင် (နာမည်တောင်မေ့နေပီ မန်းလေးမှာတွေ့တုန်းက .. ခနခန ပြောတဲ့စကားပဲ) ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေတာ.. သဘောမပေါက်ဘူး.. တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကို ဘယ်လောက်ခိုးပြီးအခုမှ ဇိမ်ကျနေလဲမသိဘူး..
ငါတော့ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ပြောလိုက်ချင်တယ်.. ကိလေသာ(ကုန်ခမ်းဖို့မပြောနဲ့) အင်မတန် ထူပြောလှတဲ့ တဏှာရူးကြီးလို့ ….
ဒါနဲ့ .. ဂျင်းနီက .. နောနော်နဲ့ဖြစ်တာဆို.. နောနော်နဲ့သာဆိုရင်တော့ သဘောတူလိုက်ဦးမယ်.. အဲအဘိုးကြီးနဲ့တော့ မလုပ်ပါနဲ့ဟ.